အမေရိကန်ကျောင်းသား အော်တိုဝမ်းဘီးယားအား မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်က လျော်ကြေ? - Yangon Media Group
အမေရိကန်ကျောင်းသား အော်တိုဝမ်းဘီးယားအား မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်က လျော်ကြေ?
ဝါရှင်တန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကိုလံဘီယာ ခရိုင်တရားရုံးမှ တရားသူကြီး ဘီးရိုင်းအေဟောင်းဝဲလ်က မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်သည် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်က ဗားဂျင်းနီးယားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အော်တိုဝမ်းဘီးယားသည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ခေတ္တအလည်သွားစဉ် သူလျှိုဟုစွပ်စွဲဖမ်းဆီးကာ မြောက်ကိုရီးယား အကျဉ်းထောင်တွင် အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ် ၁၅နှစ်ကျခံရန် အစိုးရကသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
သို့သော် မစ္စတာဝမ်းဘီးယားသည် ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ ထောင်ဒဏ် ၁၇ လသာ ကျခံရပြီး ပြန်လွှတ်ပေးခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည် မြောက်ကိုရီးယားအကျဉ်း ထောင်မှပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီးနောက် ဇာတိအိုဟိုင်းအိုပြည်နယ်၌ နေထိုင်စဉ် မြောက်ကိုရီးယားအကျဉ်း ထောင်၌ကျခံနေရစဉ်က ရရှိခဲ့ သော ဦးနှောက်သွေးယိုစီးသော ရောဂါဖြင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ရသည်။
ဝမ်းဘီးယား၏ မိဘများက မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအား တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းတရားစွဲဆိုချက်ကို မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့၍မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်အားလျော်ကြေးအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅ဝဝ ကို ဝမ်းဘီးယားမိသားစုအား ပေး ဆောင်စေရန် တရားသူကြီး ဘီရိုင်းအေဟောင်းဝဲလ်က အမိန့်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
နယူးဒေလီမြို့တွင် မြူများထူထပ်စွာကျဆင်းမှုကြောင့် လေကြောင်းခရီးစဉ်များကို ရွှေ့ဆိုင်း
ရွှေလင်ပန်း စက်မှုဇုန်တွင် ပလတ်စတစ် စက်ရုံတစ်ရုံ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား